Programmer's Diary: စည်းအပြင်ကလူ
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:19 PM
Dont' be upset. Try best as u can.
:) I ve stay silent (exactly no word) for3days per week usually. And only talk related abt job. :P
They are like that. Dont get reflection from them. Keep free in ur mind.
Understand that project manager play quiet an important role inadevelopment team! It'savery hard feeling not talking to each other at work especially when you are very stress.
Yeh! I also agree that life is easier to work underaguy manager thanalady manager! Don't worry, there are stillalot of IT job at the outside. If I were at your place, I will immediately resign. hee hee.... but bonus is worth to wait huh....
ကိုညီညီ ရေးထားတာဖတ်ပြီး အလုပ်စ၀င်ရမှာတောင် ကြောက်နေပြီ :)
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ဆက်မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာဘဲ ကိုယ်ကအကောင်းဆုံးလုပ်နေပေမဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားသလို မတူသလိုမတန် သလိုမျိုးလုပ်ရင် လခနည်းရင်နည်း ပလေ့စေ နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းပါ အကောင်းဆုံးက မထွက်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တစ်ခုကို မှတ်မှတ်ရရ ပြသင့်အောင် ပြခဲ့ပါ စည်းကမ်းသေ၀ပ်မှုကိုလည်း ကိုယ်မထွက်ခင်မှာ အတက်နိုင်ဆုံး လုပ်ပြခဲ့ဖို့လိုမယ်ထင်တယ် မြန်မာ ဆိုတာ ကိုယ့်တာဝန်ယူမှုအပိုင်းမှာ ဒင်းတို့ထက်သာ တယ်ဆိုတာ ပြခဲ့ပါ ကိုညီညီ ခင်ဗျားဟာ လူကိုလူလို နားမလည်သူတွေထဲမှာ outsider ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့် ကျွန်တောတို့ကတော့ ခင်ဗျားဘက်က အားပေးနေမယ်
don't upset i also like that... be brave. we are all human.... if can work on small companies better, more united and enjoyable...
All the best and HAPPY BIRTHAY NYI NYI
October 03, 2008 9:26 PM
I know how difficult to deal with the selfish supervior who doesn't understand the value of others. Learn this lesson and try not to be like her when you are at her position, which you will be in very near future.
ညီညီ .. အဲလို မန်နေဂျာအောက်မှာ လုပ်ရတာ တော်၂ စိတ်ပျက်စရာဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ် ။ မင်း အတွက် ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်း ပေါ်လာမယ့် ရက် မဝေးတော့ပါဖူး ။ အကြောင်းအမျိုး၂ကြောင့် သည်းခံ စောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရင် စောင့်လိုက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ။
နို့မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်စိတ်မပျော်တဲ့နေရာ ၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့နေရာ မှာ တို့ တတွေ လုပ်နိုင်တာ ၂ နည်းပဲ ရှိတယ် .... ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုလာအောင် တန်ပြန် တုံ့ပြန်ရမယ် ... အဲလိုမှ မရသေးရင် အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျောခိုင်းပြီး တခြားနေရာကနေ ထိုးဖောက်ဖို့ပဲ ။
ဒါနဲ့ ကြို ပြောထားလိုက်မယ် .. ကောင်းသောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ညီညီ :)
အခုလို အားပေးကြသူတွေ၊ အကြံဥာဏ်ပေးကြသူတွေ၊ မွေးနေ့အကြိုဆုတောင်းပေးသူတွေ အားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရင်ကလို စိတ်မျိုးနဲ့ဆို ဒီလို ဖြစ်လာရင် အလုပ်ကနေ ချက်ချင်း ထွက်လိုက်မှာပါပဲ။ ထွက်ခဲ့ဖူးတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ကျွန်တော်က တကိုယ်တည်းသမား မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတော့ အများကြီး စဉ်းစားရပါတယ်။ နောက်ပြီး စင်္ကာပူက ခွာနိုင်အောင် ကြိုးစားထားတာလည်း မကြာမီ ကာလတစ်ခုမှာ အဆင်ပြေတော့မယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အဲဒီ မတိုင်ခင် အလုပ်မပြောင်းချင်တော့တာလည်း ပါပါတယ်။ နက်ဖြန်တော့ ခွင့်ယူထားတယ်။ မွေးနေ့မှာ အလုပ်က stress တွေ မလိုချင်ဘူးလေ။ နက်ဖြန်တော့ ပို့စ်တစ်ခုခု ရေးဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
သံလွင်အတွက် အချိန်ပြည့်အာရုံစိုက်နေရင်းကပဲ အခုလို ဆောင်းပါးရှည်တွေ ဆက်တိုက်ရေးနေဖြစ်လို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ တခါတလေတော့လည်း ပို့စ်အသစ်ဖတ်ရဖို့ မေ့လောက်အောင် ကြာတတ်တာကိုး။ ဒါပေါ့လေ .. တကိုယ်တည်းသမားမှ မဟုတ်တော့ဘဲ။း)
October 06, 2008 8:08 PM
ညီညီ၊ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်၊ ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ လုပ်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ပဲပြောင်းပြောင်း အလုပ်ဖော်တွေနဲ့ ပြေပြေလည်လည်ရှိပြီး အလုပ်မှာပျော်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေဗျာ။
October 07, 2008 3:39 AM
Me too. On previous Jan, no birthday celebration in our company. Don't know forget or purposely. Total 8 persons who born in Jan are not happy. On Feb, when they celerate for Feb born, we (8 persons) don't go. HR Manager call to come, we reply - no celebration for us, why we should celerate for others.haha
But ur case is worse bcaz only u. Just quit. Many jobs for us in singapore. :P
မပြည့်ဝတဲ့တစ်ချို့ သော ၊ စင်္ကာပိုရီးယန်း တွေရဲ့စရိုက် ပါပဲ။
ကိုညီညီ့အတွေ့ အကြုံနဲ့ ပေါင်းရင် ကြုံရပေါင်းများပြီ..ပဲဆိုရပါတော့မည်။
ကျနော့်အရင်ကမန်နေဂျာလည်း သည်အတိုင်းဘဲ။ သူကယောက်ျားလည်းဖြစ်တော့ ညစ်တီးညစ်ပတ် ဆဲကလည်း ဆဲသေးတယ်။ အခုတော့ သူက ဒါရိုက်တာဖြစ်သွားပြီ။ နောက်မန်နေဂျာက သဘောကောင်းလို့ တော်ပါသေးရဲ့ဗျာ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ.... စင်္ကာပူက ခွာနိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပါ။ ဟိုတလောက ဘယ်သူ့ဘလော့ဂ်မှာလည်း မသိဘူးရေးထားတာ ဖတ်ရတယ်။ သူက.... လူကို လူလို ဆက်ဆံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့ ဥရောပ၊ ယူအက်စ် သို့မဟုတ် အော်ဇီကို ပြောင်းချင်သတဲ့။ နေ့စဉ် အမ်အာရ်တီ စီးပြီးပြန်လာတိုင်း “Doors are closing." ဆိုတဲ့ အသံကြားရင် သူ့ကို စောင်းပြောနေတယ်လို့ ထင်မိတယ်တဲ့။
ကျနော်လည်း ကျနော့် လုပ်ငန်းဆောင်တာလေး ပြီးပြတ်တာနဲ့ စင်္ကာပူက တစက္ကန့်မဆိုင်း ခွာပြေးတော့မယ် စိတ်ကူးတယ်။ ဒီမလွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးထဲမှာ နေရတာ အသက်ရှုကြပ်သဗျာ။
same to u, Ko nyi, I hate this environment so much.Not only singaporean,but Malaysian Chinese also possessabig jealousy,very rude and always try to swop from our back.I abhor them.Keep it up.